ह्वात्तै सस्तो भयो सुन, आज ८ महिना यताकै सस्तो ! – eSidhakura
दाईलाई न्या’य दि’लाउन अमेरिकादेखि नेपाल आएकी पाइलट सदिक्षालाई भेट्न पी’डितको ओ’ईरो… भिडियो
Breaking: विप्लवसँग वार्ता गर्न वार्ताटोली गठन
बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्षको गाडीबाट ८ लाख घुस ब’रामद, अध्यक्ष हा’मफा’लेर फरार
प्रहरी नि’रीक्षक उ’द्धव पोखरेल ज’सले मि’सिलमा मृ’त’कको ग’लत फो’टो रा’खेका थिए
घा’इते म’हिलालाई जि’उँदै पु’रेर स्का’भेटर अ’परेटर फ’रार
यस्तो बन्नेछ आज प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्ने सन्थाल एकीकृत वस्ती… ९ तस्बिरमा हेर्नुहोस
मुख्य पृष्ठअर्थ/बाणिज्य अर्थनीतिह्वात्तै सस्तो भयो सुन, आज ८ महिना यताकै सस्तो !
ह्वात्तै सस्तो भयो सुन, आज ८ महिना यताकै सस्तो !
काठमाडौँ – नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बुधबार घटेको छ। दुई दिन लगातार घटेपछि मंगलबार बढेको सुनको मूल्य बुधबार घटेको हो । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा १ हजार १ सय रुपैंयाले घटेको छ । जससंगै छापावाला सुनको मूल्य ८९ हजार ८ सय कायम भएको छ। त्यस्तै बुधबार तेजाबी सुनको मूल्य भने तोलामा १ हजार ५० रुपैंयाले घटेको छ। जस पश्चात तेजाबी सुनको मूल्य नेपाली बजारमा ८९ हजार ३ सय ५० कायम भएको छ।
यस अगाडी छापावाला सुन आइतबार ९० हजार ८ सय, सोमबार ९० हजार ७ सय र मंगलबार ९० हजार ९ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुन आइतबार ९० हजार ३००, सोमबार ९० हजार २ सय र मंगलबार ९० हजार ४ सय रुपैंयामा कारोबार भएको थियो। बुधबार कायम भएको छापावाला सुनको मूल्य ८ महिना यताकै सस्तो रहेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबारको मूल्य असार ४ गते यताकै कम हो। यस हिसाबले आज कायम भएको छापावाला सुनको मूल्य २ सय ४४ दिन यताकै कम रहेको छ।
असार ४ गते छापावाला सुन ८९ हजार ८ सयमै कारोबार भएको थियो। त्यस्तै बुधबार कायम भएको तेजाबी सुनको मूल्य भने असार २ गते यताकै सस्तो रहेको छ। तेजाबी सुन त्यस दिन ८९ हजार २ सय ६५ रुपैंयामका कारोबार भएको थियो। असार महिना देखि लगातार उकालो लाग्न थालेको सुनको मूल्यले साउनमा रेकर्ड नै बनाएको थियो। साउन २३ गते सुन इतिहाँसकै महँगो १ लाख ३ हजार ५ सय रुपैयाँ सम्ममा कारोबार भएको थियो। बुधबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य तोलामा २० रुपैंयाले घटेर १ हजार ३ सय ४० कायम भएको छ।
शिखर इन्स्योरेन्सले फेरि ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने
हिजो बढेको सुनको मूल्य आजै घट्यो !
प्रतिघण्टा १ सय २० किलोमिटर गु’ड्नसक्ने इलेक्ट्रिक बाइक सार्वजनिक
जगदम्बा सिमेन्ट उ’द्योगमाथि १०० करोड बढी ठ’गीको आरोप
७ दिन पनि नबित्दै फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य